အိန္ဒြာ: 1/1/09 - 2/1/09
အမေ့မာနတွေကတော့ ရဲရဲလင်းလင်း ၀င်းပ
သမီးခမျာ ငယ်သေးတော့ မသိတတ်ခဲ့ဘူး။
အဖေ မတ်တပ်စမ်းပေးခဲ့တဲ့ ခြေဖ၀ါးမှာ
အဖေ တွဲကူခဲ့တဲ့ လက်ချောင်းသေးသေးလေးတွေက
ကွန်ပြူတာ တဖျောင်းဖျောင်း ရိုက်နေပြီ။
အဖေ အစာခွံ့ခဲ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းကလေးမှာ
အဖေ ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာက
သမီးကို ခပ်မာမာ ပြဌာန်း ထားခဲ့တော့.............။
အဖေ့ မှာ သားတွေ၊ သမီးတွေများနေနိုင်ပေမယ့်
သမီးမှာ အဖေတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာလေ...။
အဖေ့ အသစ်စက်စက် သားငယ်လေး အတွက်
သမီးကို ချော့မြှူခဲ့တဲ့ တေးချင်းတွေကအဆင်သင့်၊
အဖေ့သားလေး အိပ်တတ်ခဲ့ ရော ပေါ့..။
ကျွဲပုခုံးကို... ထလို့။ ။
ဒီကဗျာလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောစရာတွေက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စာနီးနီးလောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်.။
အရမ်းကိုချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစု ခံစားချက်လေးပေါ့..။
သူက ကိုယ့်ကို ရင်တွေဖွင့် ထုံးစံအတိုင်းကိုယ်ကဦးအောင်ငို..နောက်ငါ့ကို ကဗျာရေးပေးနော်ဆိုတော့လည်း ရင်နဲ့တစ်လုံးခံစားပြီး..ရေးချလိုက်တာ..
နောက်...မဂ္ဂဇင်းထွက်လာတော့ သူငယ်ချင်းကိုသူ့အဖေကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ လက်ဆောင်ပေးလိုက်မိပါတယ်.။
ဖေဖေ က ငိုင်နေလိုက်တာဟာ.အကြာကြီးပဲ..၊ ငါလည်း ငိုပြီးပြန်လာခဲ့တယ်တဲ့... ဆိုတော့ ကိုယ်စိတ်မကောင်းတွေထပ်ဖြစ်ရပြန်တယ်..။
ဘာအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ အိမ်ထောင်တစ်ခုပြိုကွဲသွားသွား...မိဘတွေကတော့ ပုဂ္ဂလိက အာဃာတွေ ၊ နာကျည်းမှုတွေ..၊ ဒေါသနဲ့ မန်မာနတွေ...နောက်အနည်းဆုံးဂျင်းစိမ်းနဲ့ မိတ်သလင်ဆိုတာမျိုး.နဲ့ဖြစ်ဖြစ် စိတ်အခံအမာထည်နဲ့ ခံစားချက်ကို တင်းခံထားနိုင်ကြကောင်းပေမယ့်
မိဘနှစ်ပါးစလုံးအပေါ်မှာ ချစ်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းနဲ့ လေးစားတွယ်တာခြင်းတွေပဲရှိတဲ့ သားသမီးဘက်မှာ ဘယ်အရာကမှ ဖျောင့်ဖျ၊ မတ်တည်ပေးနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး...
အခုကဗျာလေးထဲကကောင်မလေးခမျာလည်း သူ့အဖေ့ကို ချစ်ပေမယ့် လွမ်းရုံပဲတတ်နိုင်ရှာတယ်လေ...။
at 5:59 AM 18 comments:
ဆရာကိုမိုးဃ်ဇော်ရဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့.ဆယ်နှစ်ကျော်က ကဗျာလေးပါ။
မမြင်ရတဲ့ ပန်းတွေသာ မရှိခဲ့ရင်
မကြားရတဲ့ သီချင်းတွေသာ မရှိခဲ့ရင်
at 2:05 AM6comments:
“တယောသံနဲ ကတဲ့ ကဗျာ”
ဒီဝတ္ထုလေးနဲ့ Blog လောကဆိုတာကို ပထမဆုံးထိတွေ ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်..။ ဆရာဖိုးမောင် ဆရာမိုးမောင်တို့ရဲ့
Happy Cloud မှာတင်ခဲ့ပေမယ့် အခု မိတ်သစ်ဆွေသစ်တွေပါ ခံစားစေချင်လို့ ရယ် ကိုယ့်စာလေးတွေပြန်စုချင်တာရယ်ကြောင့် နောက်တကြိမ် တင်လိုက်ရတာပါ..။
(တကယ်က အသစ်ရေးမရလို့ အဟောင်းတွေကို ချွေတာရေးနှင့်တင်နေခြင်း :p) မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေလဲ..ပြန်ဖတ်ချင်လာရင်ဖတ်ကြပေါ့..နော....။
လ ရောင်ကို အငမ်းမရ သောက်သုံးပြီး
ငါ့ဂီတမှာ ရီရီမူးမူး ကခုန်နေခဲ့တာ
တရိုင်းရိုင်း၊ တယဉ်ယဉ် ဖမ်းစား ညှို့ငင်နိုင်လွန်းလို့၊
ငါ့အိပ်မက်ကို၊ တစ်ဖဲ့ ဖဲ့ပြီး ချကျွေးလိုက်တယ်လေ...။
ဒီညရဲ့ မီးခိုးရောင် ကောင်းကင်ယံဆီမှာ လမင်းဟာ ငွေပြာရောင် အ၀န်းအ၀ိုင်းတစ်ခု အဖြစ် တရွေ့ရွေ့ တည်ရှိ နေခဲ့တယ်။ ညရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရောင် နက်နက်ဟာ လမင်းက ဖြာကျနေတဲ့ ငွေမင်ရောင်တွေနဲ့ ခပ်စိပ်စိပ် ယှက်ဖေါက်ပြီး နက်မွဲမွဲ ပြာလင်းလင်း ရှိနေခဲ့တယ်။ လရဲ့ရောင်ခြည်တွေ မကျအောင် ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ညဟာ သူပိုင်အတိုင်း အခင်းလိုက် အကွက်လိုက် နက်ကျော..လို့၊ ဒီအုန်းပင်ရှည်ကြီးရဲ့ အရိပ်ကလည်း လက်တံရှည် တစ္ဆေတစ်ကောင် ကခုန်နေသလိုမျိုး တယိုင်ယိုင် ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရမ်းလို့။ လမင်းကို မော်ကြည့်ပြီး ဆွဲဆွဲငင်ငင် အူကျွေးနေတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဘာရှိနေမလဲ။ တိုင်တည် နေတာလား၊ တိုင်တမ်းနေတာလား၊ တောင်းပန်နေတာလား၊ တောင်းခံနေတာလား.....၊ သိပ် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်။
တယောဆရာ ဒီညကို စောင့်နေခဲ့ရတာ တစ်လတိတိရှိပြီ၊ နောက်ဆယ်ရက် ကြာရင်လပြည့်ည၊ နောက် ငါးရက်ဆို လပြည့်ည ၊ တနေ့တုန်းက သဘက်ခါဆို လပြည့်ည...၊ မနေ့တုန်းက မနက်ဖန်ဆို လပြည့်ည.....၊ အဲသလိုမျိုး။
တယောဆရာ ဒီရွာကို ရောက်ပြီး စိတ်လိုလက်ရ သေသေသပ်သပ် လုပ်ခဲ့တာဆိုလို့ ဒီကွပ်ပျစ် အ၀ိုင်းတစ်ခုဘဲ ပြစရာရှိတယ်၊ သူတယောထိုး ညည်းညူဖို့၊ သူရီဝေယစ်သီဖို့၊ သူကျောခင်းပြီး အဆုံးမဲ့ ငေးမော လွင့်မျောဖို့ အတွက်ဘဲ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အုန်းပင်ရှည်ကြီးရဲ့ပင်စည်ကို ၀န်းကြပ် ဖွဲ့တည်ထားတဲ့၊ ဒီနှစ်ပေသာသာ ကွပ်ပျစ်အ၀ိုင်းလေးပေါ်မှာ ငွေပြာရောင် လင်းပနေခဲ့ပြီ။
ဒါဟာ လပြည့်ည၊ သိပ်လှတယ်လို့ တယောဆရာဖွဖွ သိပ်သိပ် ရေရွတ်နေခဲ့တယ်။
အရက်သမားအိုကြီးတောင် သူ့ဖောပွပွ ကျောပြင်ကြီးကို အုန်းပင်ကြီးရဲ့ ပင်စည်မှာ ရိယိုင်မှီနွဲ့လွန်းစွာ ကပ်ထားပြီး သူ့ညှင်းသိုးသိုး ဦးခေါင်းကြီးကို သူ့ရင်ခွင်ရှိရာဘက် ညွှတ်ညွှတ်စိုက်စိုက် ချထားရတဲ့အချိန် ရောက်ခဲ့ပြီ။
တယောဆရာကတော်ကတော့ ဘယ်လိုမှ စိမ့်အိုင်လာနိုင်ခြင်း မရှိတော့တဲ့ သူမရဲ့နို့ပိန်လေးကို အသာအယာ ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီး ပြာနှမ်းမွဲခြောက်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်း သေးသေးလေးပေါ်ကို ရေစက်လေးတွေ တစ်စက်ခြင်း၊ တစ်စက်ခြင်း ချပေးနေလေရဲ့၊
ဒီအသံဟာ ကြောင်ပေါက်လေးတစ်ကောင်ရဲ့ “တအဲ့အဲ့” အော်သံလို ကြားမှာ ကြေကြေမြည့်မြည့် ထွက်ပေါ်နေခဲ့တယ်။
"သိလားဦးဘတူ"၊ အင်း........ ။ သူတို့စကားဝိုင်းဟာ အဲဒီ့လိုစတင်လေ့ရှိပြီး၊ အင်း...ထက် စကားပြန် ပိုမရတဲ့၊ အရက်သမားအိုကြီး လုံးလုံးလျားလျား အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှ အဆုံးသတ်လေ့ ရှိတယ်။ တယောဆရာ ကတော့ သူပြောသမျှကို အင်းလိုက်ပေးဖေါ်ရတဲ့ အရက်သမားအိုကြီးကို အလွန်ချစ်ခင် နေတတ်ပြီး၊ သူ့အိပ်ရာ ပေါ်အထိ တွဲ ပို့ပေးလေ့ရှိတယ်။
ဆိုတာကတော့ စကားတွေရဲ့ အကြားအကန့် အနားသတ် တစ်ခုလို၊ မှန်မှန်ပေါ်ထွက် နေလေ့ရှိတယ်။ ဒီနေ့လို စကားတွေပြောမနေဘဲ၊ တယောကိုဘဲ ချွဲချွဲငင်ငင် ထိုးနေတဲ့ နေ့တွေမှာတော့ အရက် သမားအိုကြီးဟာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး စောစောအိပ်ပျော်သွားလေ့ ရှိတယ်။
ဒီနေ့လို လပြည့်ညမျိုးမှာ တယောဆရာ ၀ဋ် ကျေ မပျက်ပြောမယ့် အကြောင်းအရာကို တယောဆရာကတော် စိတ်ကုန် အားပျက်လွန်းစွာနဲ့ သိနေခဲ့တယ်။ ဟိုး.....ကျန်ခဲ့တဲ့ လပြည့်ညတွေ မှာတော့ ညရီတရောမှာ(တမင်) လျှော်ထားတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ဖားဖားဝေအောင်ချထားပြီး...၊ အကိုင်းတွေချင်း နွယ်ယှက်နေတဲ့၊ ယုဇနပင်စည်ကို မှီနွဲ့ပြီး၊ လရောင်အောက်မှာ မှုန်ဝင်း နေချင်ခဲ့တာ။
“သိလား ဦးဘတူ” “အင်း...”။
ဒါဟာ ကျွန်တော်ပျောက်ဆုံး နေခဲ့တဲ့ ကဗျာရှည်တစ်ပုဒ်၊ အိပ်မွေ့အချ ခံထားရတဲ့....ကျွန်တော့်ဝိညာဉ်၊ ကြည့်ပါဦးဗျာ....၊ သိပ်ကို ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ အလမ္မာယ်ဆရာရဲ့ စိတ်ကူးပါးခွက်လို၊ လရောင်ရွှဲနေတဲ့ ပိတုန်းရောင် မြွေလေးတွေလို၊ ကျွန်တော့်တယောသံမှာ ကော့လိုက်၊ ညွှတ်လိုက်၊ ကွေးလိုက်၊ ၀ိုက်လိုက်နဲ့၊ “သိလား ဦးဘတူ” “အင်း...”။
ဘယ်လောက်လှလိုက်လဲ၊ ကျွန်တော့် တယောသံမှာ လိုက်ကနေကြတာ၊ ကျွန်တော့်ရင်တွေ ခုန်နေလိုက်တာမှ.. “သိလား ဦးဘတူ” “အင်း...”။ ဟောဒီ့လို လပြည့်ညဘဲပေါ့.....၊ ချွဲငင် ကြေကွဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဂီတကို အဖေါ်လုပ်ပြီး၊ စည်းချက်ကျကျ ပျောင်းအိ နွဲ့သွယ်နေကြတဲ့ သူ့တစ်ရပ်လုံးလုံး ဖါးဖါးဝေနေတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်တွေရယ်၊ နောက် ဟောဟို ယုဇနပင် အကိုင်းအလက်တွေ ကြားက လမင်းရဲ့ အလင်းတွေ ရောင်ပြန်ဟတ်ပြီး တဖျတ်ဖျတ်လင်းလဲ့ နေတဲ့ ၊ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် မျက်ဝန်းလေးတစ်စုံရယ်။
အဲဒီ့ အချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်ဟာ အထီးကျန် မဟုတ်တော့ဘူး။ “သိလား ဦးဘတူ”။ ကျွန်တော်လေ လပြည့်ညကို၊ လပြည့်ညပြီးကတည်းက စောင့် နေခဲ့ရတာ၊ တနေ့တုန်းက သဘက်ခါဆိုလပြည့်ည၊ မနေ့တုန်းက မနက်ဖန်ဆို လပြည့်ည၊ အဲသလိုမျိုး........
တအဲ့အဲ့ ရှိုက်ညည်းနေတဲ့ သားလေးရဲ့နဖူးက အပူငွေ့ကိုအလန့်တကြား စမ်းကြည့်ရင်း..... တယောဆရာ ကတော် ဘယ်လိုမှထိမ်းချုပ် မျိုသိပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘူး....။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုစကားမျိုးကိုဘဲ ရီရီမူးမူး ပြောနေနိုင်သေးတဲ့ တယောဆရာကို စူးစူးနစ်နစ် နာကျည်းနေမိတယ်။
ဟိုး....တုန်းကတော့ အဲဒီ့ကဗျာ ဆိုတဲ့အရာကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိချင်လွန်းလို့ သူများကို တိတ်တိတ်လေး မေးမြန်းခဲ့ ဖူးတယ်။ ကဗျာဆိုတာ သီချင်းလိုပဲပေါ့ ဆိုတော့၊ သီချင်းနဲ့ကဗျာကို ထပ်တူပြုကြည့်ပြီး နဝေတိမ်တောင်နဲ့ ရယ်မြူး ကြည်နူးနေခဲ့ဖူး တယ်။
တယောတစ်လက်နဲ့ ဘယ်ကဘယ်လို ရောက်လာမှန်း မသိတဲ့၊ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့် မွန်ရည်တာနဲ့၊ သေရည်သေရက် တော်တော်မက်မော ပုံပေါ်တာကိုဘဲ သိတဲ့၊ တယောဆရာကို ဆံပင်တွေ ဖါးဖါးဝေအောင် ချပြီး လရောင်အောက်မှာ ခိုးကြည့် ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့အနုပညာရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဘက်...ဆိုတာကို ဘုမသိ ဘမသိ ကြည်နူးပျော်ရွှင် ခဲ့ဖူးတယ်။ အနုပညာ ဆိုတဲ့ စကားစုကလည်း သူမနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်ကိုဖြစ်လို့။
အမေ့ရဲ့ ဆူသံဆဲသံတွေကို လစ်လျူရှုပြီး သူမလို မည်းကြုတ်နေတဲ့ ရုပ်ဆိုးမကိုမှ ယူချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သူ့ကို မြတ်နိုးလိုက်ရတာ....။
လှတာမက်ည စာခက်ဆိုတာမျိုးနဲ့ အဲသလို ဆန်ဆန် မေးငေါ့လှောင်ပြောင် သံတွေကိုတော့ ကျုပ်ယောက်ျားလို စာတတ်၊ ပေတတ်၊ အင်္ဂလိပ်စာတတ်က တော်တို့လို ဖါးရိုက်၊ ငါးနှိုက်လုပ် ရမှာလားလို့ ခပ်မော်မော် ပြန်ပက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျုပ်ယောက်ျားရဲ့ ဒီလောက် နူးညံ့လှပတဲ့ လက်တွေဟာ ကွန်ပစ် ၊မြုံးထောင်ဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး၊ သူ့အနုပညာတွေကို သူဖန်တီးနေဖို့လို့ ခပ်ကြွားကြွား ပြောပစ်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲသလိုမျိုးနဲ့....။ တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက် ဈေးတောင်းခေါင်း တင်ပြီး။
ဘယ်လို မောပန်းမှုမျိုးကမှ သူ့တယောသံ၊ သူ့ယစ်ယစ်ဝေေ၀ ကဗျာရွတ်သံတွေကို တိုးမပေါက်ခဲ့ဘူးလေ။ အထူးသဖြင့် ဟောဒီ့လို လပြည့်ညတွေမှာ “သိလား ဦးဘတူ” ကျွန်တော့် နှလုံး သည်းပွတ်ထဲကနေ၊ ပါးစပ်ဖျားကို ကဗျာတစ်ပုဒ် ခုန်တက်လာလိုက်တာ။
ဘာအနုပညာ လဲ....၊ အလကားဟာတွေ အလကား ထမင်းတစ်နပ်တောင် မရှာနိုင်တဲ့ဟာတွေ၊ ရှင်ဘာအသုံးကျခဲ့လဲ၊ ရှင်ဘာ အသုံးကျဖူးလဲ။ ရှင့်ကို အထင်ကြီးခဲ့သမျှ အလကားပဲ။
ရှင့်မှာ ဖခင်စိတ်ဆိုတာ ရှိရဲ့လား၊ ရှင်ဟာ ဒီတယော ၊ ဒီကဗျာ...၊ ဒီလရောင်၊ ဒီဆံပင်တွေကလွဲပြီး ဘာကိုမှ စိတ်မ၀င်စားတော့ ဘူးလား..၊ ဒီကလေးကို မီးဖွားပြီးကတည်းက ကျွန်မ ဈေးမရောင်းနိုင်တော့တာ၊ ထမင်းနပ် မကျော်အောင် ကြံဖန်နေရတာ၊ ကလေးက သေးရ ညှက်ရတဲ့ ကြားထဲ ကျွန်မနို့မထွက်လို့ သားလေး တပိန်ပိန် တလိန်လိန်၊ ရောဂါနဲ့တစ်လုံး ဖြစ်နေတာ။ ဒါတွေ ရှင်မြင်ရဲ့လား..၊ ရှင်သိရဲ့လား...၊ ရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးလား..။ အခုကလေးကို ဆေးမြီးတိုနဲ့ မရတော့ဘူး၊ ကျွန်မ မြို့တက်ဆေးကုချင်တယ်၊ ဘာနဲ့ကုမလဲ၊ ဘယ်ပိုက်ဆံနဲ့ ကုကြမှာလဲ၊ ဘယ်သူ့ဆီမှာထပ်ပြီး ချေးရ ငှားရ မှာလဲ။ ရှင်တွေးမိရဲ့လား.... ဘာဖအေ လဲ၊၊ ဘာလင်ယောက်ျား လဲ...........။ ရှင်ထွက်သွား.....၊ ရှင့်တယောနဲ့ ရှင်ထွက်သွား...၊ ရှင့်အနုပညာနဲ့ရှင်...၊ ရှင့်ကဗျာတွေနဲ့ ရှင်..ထွက်သွား..။ ရှင့် အရက်ပုလင်းနဲ့ ရှင် ထွက်သွား......။
လရောင်က လန့်ဖျန့်မည်းအုံ့ သွားခဲ့တယ်။ အရက်သမားအိုကြီးတောင် ခေါင်းထောင်ပြီး မျက်လုံးကြီးကို ပြူးကြည့်လာတယ်..။ တယောဆရာဟာ ပြောလက်စတွေ လွတ်ကျပြီး အံ့သြ မင်တက်လွန်းစွာ သူ့မိန်းမကို ငေးကြောင်ကြည့် နေတယ်။
တယောဆရာရဲ့ ရင်ဘတ်ဟာ တဖျစ်ဖျစ် လောင်ကျွမ်းတောက်လောင် လာတယ်။ တယောဆရာရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးဟာ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေခဲ့တယ်။
တယောဆရာကတော်ကတော့ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး အသားကုန် ရှိုက်ငင်အော်ဟစ်နေရာက တဖြည်းဖြည်းခြင်း ငြိမ်လျော့ကျသွားပြီး အကြီးအကျယ် ဒါဏ်ရာရထားတဲ့ သားကောင် တစ်ကောင်လို တအင်အင် ညည်းညူနေရှာတယ်။
တယောဆရာဟာ အိမ်မက်ထဲမှာ လမ်းလျောက်နေသူလိုမျိုး သူ့တယောလေးကို လည်ပင်းက ဆုတ်ကိုင်ပြီး တရွေ့ရွေ့ ထွက်ခွာသွားလိုက်တာ လမင်းဟာ ပြန်မလင်းချင် လောက်အောင် ညှိုးရော် သွားခဲ့တယ်။
တယောဆရာကတော်ဟာ သူမရဲ့ ပူလောင် ယောက်ယက်မှုထဲမှာ မူးမိုက်သွားမတတ် နှမျောတသ လွန်းစွာနဲ့ တသိမ့်သိမ့် ရှိုက်ငင်နေရှာတယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်းမှ စိမ့်ထွက်လာတဲ့ သွေးစသွေးန တွေကိုတောင် မသုတ်နိုင် တော့ဘူး။
ဒါဆေးဘိုး......မသိဘူး..၊ ကျန်တာမသိဘူး....၊ ကျန်တာတွေမသိဘူး....။
တယောဆရာကတော်ဟာ ခဏသတိလစ် သွားခဲ့ သလား၊ တအောင့်လောက် ရူးနှမ်းသွားခဲ့သလား သူမကိုယ်သူမ မသေချာခဲ့ဘူး။ ဆံပင်ရှည်တွေ တစ်ဆယ် သားကို တစ်သောင်းတဲ့၊ သူမတစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ဘယ်တုန်းကမှ မကြားဖူးတဲ့ ဈေးဝယ်သူ...၊ ဒါမှမဟုတ်..သူမဆီကို ဘုရားရှင်က ဖန်ဆင်းပြီး လွှတ်လိုက်သလား မသိတဲ့ကယ်တင်ရှင်။ ငွေတွေကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ပြီး ဟိုလူ့ လက်ထဲပါသွားတာ မြွေတွေအထွေးလိုက်လို့ မြင်လာတယ်.။ မသပ်မရပ် ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေတဲ့ ဦးခေါင်းကို လက်ဖ၀ါးနဲ့ စမ်းကြည့်ပြီး သူမတဟားဟား ရယ်မောလိုက်မိ သေးသလား။ ဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်သေးလဲ.......။
“ဘာ...ဦးဘတူ၊ ဘာ..ပြောတယ်...၊ ကိုမောင့်ကို သမန်းကုန်းဘူတာမှာ တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ ဟုတ်လား.။ ကျွန်မ...ကျွန်မလိုက်သွား.........၊ ကလေး...ကလေး...။ ကြည့်ထားလိုက်နော်။
ဟာ..နေဦး ၊ နင်ဘယ်လို.........။
ကျွန်မ..ကျွန်မ ကိုမောင့်ကို ဘာတွေ ပြောခဲ့မိသလဲ...၊
ကိုမောင့်ကို နာကျင်အောင် ဘယ်လိုတွေများ စော်ကားတိုက်ခိုက် လိုက်မိလဲ ....ကျွန်မသားလေးအတွက် အရမ်းကိုပူပင်နေမိလို့ အရမ်းကို ၀မ်းနည်းအားငယ် နေမိလို့၊ အခု သားလေးကို မြို့မှာ ဆေးသွားကုရင် ကိုမောင်ရှိမှဖြစ်မှာ။ ကိုမောင့်ရယ် ကိုမောင့်ကို မိညိုဘယ်လောက် ချစ်တယ် ဆိုတာ တယောဆရာကတော်ရဲ့လေ၏ လျင်မြန်ခြင်းမျိုးမှာ၊ သူမ ခင်ပွန်းသည်ကလွဲပြီး ဘာမှ...မမြင်..မသိ မကြား နိုင်တော့ဘူး..။
တယောဆရာကတော်ဟာ ချက်ချင်းလိပ်ပြာနှုတ်ခံ လိုက်ရသူလို အသက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။ မောပန်းမှုနဲ့ လှိုင်း ထန်နေတဲ့ သူမရဲ့ ရင်ပြင်ဟာ ပေါက်ထွက်လုမတတ် ဗောင်ဗင်ဆန်သွားတယ်။
ခင်းထိုင်ထားတဲ့ ပုဆိုးစုတ်ပေါ်ကို ကစဉ့်ကယဲ လွင့်ကျထားတဲ့ ငွေစက္ကူ အကြွေတွေ၊ တယောကို ပခုံးပေါ် ခပ်နွဲ့နွဲ့မှီ၊ မျက်ဝန်းကို စုံပိတ်ပြီး.....၊ မဟုတ်ဘူး....၊ သူမခြောက်သွေ့ အက်ကွဲလာတဲ့ လည်ချောင်းကနေ အသံမဲ့ အော်ဟစ် ပစ်လိုက်တယ်။
သူမရဲ့ယောက်ျား၊ သားလေးရဲ့အဖေဟာ။ ဒီလိုမသိမ် ဖျင်းဘူး၊ အောက်တန်းမကျဘူး၊
သားလေးရဲ့အဖေဟာ ဒီလိုလူစားမျိုး မဟုတ်ဘူး...။
အိပ်မက်က လန့်နိုးလာသလို သူမျက်လုံးကို အလန့်တကြား ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ နီရဲပြူးကြောင်ြပီး ၀င်းဝင်းတောက် နေတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေဟာ။
ဟင် ဒါဘာတွေ လဲ၊ ဒီငွေတွေက ဘာတွေလဲ...။
နင်.. မိညို...။ မိညို... နင်..မိညို၊ နင်...ဆံပင်တွေ..၊ ဆံပင်တွေ...၊ ငါ့ ဆံပင်ရှည်တွေ၊
ဗြုန်းကနဲ ထရပ်လိုက်တဲ့ တယောဆရာ့လက်ထဲက တယောဟာ ဘေးနားက ရထားသံလမ်းနဲ့ ကိုင်အရိုက် ခံလိုက်ရပြီး တယောဆရာရဲ့ နှလုံးအိမ်တွေလိုဘဲ အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ကွဲကြေသွားတယ်..။
ခုန်အုပ်လိုက်တဲ့ ဒေါသတွေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်သား ရထားသံလမ်း ပေါ်ကို အလုံးလုံးအထွေးထွေး ကျသွားတယ်။ သူတို့ကို ရထားဥသြသံက အလန့်တကြားနဲ့ ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ် တားမြစ်နေသေးတယ်။ အချိန်က နေ၀င်ရီတရောလေးပါပဲ။
အရက်သမားအိုကြီးဟာ....၊ သူ့ဘ၀မှာ ဘယ်တုန်းကမှ ၊ ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဒီအချိန်ဆိုဝတ္တရား ပျက်ကွက်လေ့ မရှိဘူး....။တောက်!!!! စိတ်မရှည်တော့ဘူးကွာ......။
လေချဉ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်တက်၊ တံတွေးကို ပျစ်ခနဲ နေအောင်ထွေးပြီး......အနှီးနဲ့ထုပ်ထားတဲ့ ကလေးလေးကို ကွပ်ပျစ် အ၀ိုင်းပေါ်မှာ ဒီ့အတိုင်း တင်ထားပစ်ခဲ့တော့တယ်......။
(၁၉၉၈ ခုနှစ်ကရေးဖြစ်ခဲ့ပြီိး.ကိုယ့်ရဲ့နုနယ်တဲ့ အတွေးအခေါ် အရေးအသားတွေကြောင့် စာပေစိစစ်ရေးတောင်ကိုမကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုလေးပါ..။ ကိုယ့်ဘာသာတော့ တော်တော် နင့်နေအောင်ရေးထားခဲ့ရတာမို့ ဘယ်အချိန်ပြန်ဖတ်ဖတ်ကြိုက်နေ ၀မ်းနည်းနေမိခဲ့ပါတယ်..။)
at 7:44 PM7comments:
ဘယ်တော့မှ အသားနုတက်မှာ မဟုတ်ဘဲ
ဖန်ပုလင်းထဲက ဆေးစိမ်ကင်းခြေများတွေ ရောင်းတယ်
၀ံပုလွေတွေရဲ့ နှာသီးဖျားမှာ တဖျတ်ဖျတ်ပျံချင်တဲ့
လိပ်ပြာစိမ်းတွေရဲ့ ညာဖြောင့်လက်သီးတွေ ရောင်းတယ်
ပွဲချင်းပြီးမွဲလိုက်ရတဲ့ မျက်ဝန်းမျက်ဆံတွေ ရောင်းတယ်
အာပတ်ဖြေသူတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်လက်တွေ ရောင်းတယ်
မလိမ်မိုးမလိမ္မာ မိုက်ဂိုက်တွေ ရောင်းတယ်
အက်ဒီဆင်ရဲ့ ဦးနှောက်ဆားစိမ် ရောင်းတယ်
မုသာဝါဒနဲ့ ကာယကံမြောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေရောင်းတယ်
မချိုမချဉ်ပြုံးထားတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ သလုံးသားနဲ့
အိမ်အပြန်မျှော်နေရှာတဲ့ အမေ့ရဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံ ရောင်းတယ်
ငါ့ ချွေးနှဲစာ ကဗျာတွေ ရောင်းလိုက်တယ်...........
ဈေး ကွက် အ မှီ မွှေး ထား ခဲ့ ရ တာ။ ။
ဒီကဗျာလေးကို..ဟသာင်္တမြို့သား ကဗျာဆရာမောင်လင်းခက် ကွယ်လွန်ခြင်း(၃)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲလေးအတွက် အမှတ်တရ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ "မှော်တောထဲကမီးအိမ်" လက်ကမ်းကဗျာစာအုပ်လေးအတွက်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..
.ကျန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်နီးပါးက ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ.....
ဘယ်မဂ္ဂဇင်းကိုမှမပို့ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် Blog လေးမှာတော့ အမှတ်တရပေါ့....။
at 5:18 AM 16 comments:
ကိုယ့် သန်းကောင်ယံတွေကို လှုပ်နိုး၊
ကိုယ့် အိမ်မက်ကို ပန်းလို ပျိုး ခဲ့တဲ့
အဲဒီ့ ဂျင်းပင်(န်) အပြာလေး ပဲဖြစ်မှာပါ။
ရှိန်းမြ တစ်ကိုယ်ရည် အတွေး
ကိုယ့် ရင်ခုန်ကဖေးလေးရှေ့ ဖြတ်လျောက်ဖို့
မြားလို ရိုင်းမပြစမ်းနဲ့ ကောင်လေးရယ် ။
မင်း ခြေသံကို..မှ.....ချူချ လိုက်ချင်သတဲ့
သီချင်းလို ကိုယ် ဆိုခဲ့မိပေါ့။
ကိုယ့် မျက်ဝန်းထောင့်စွန်းလေးမှာ ပျက်ကွက်
နာ ဖျား ကွဲ ကြေ ။
ငါ က ........
မင်း နဲ့မှ ချို ချင်နေခဲ့တယ် ။ ။
(၂၀၀၇ ခုနှစ် အချစ်ဂျာနယ်)
ဒီကဗျာကို တင်လိုက်ရင်ကောင်းချီးဝိုင်းပေးကြမယ့်သူတွေ စောင့်နေကြမယ်ဆိုတာသိပါတယ်..။
"" ဟမ်!!ဘာတုန်း..အိန္ဒြာ လဲဒါမျိုးလေးတွေရေးချင်တာပေါ့ဟ..""
အြိန္ဒာ့ Blog ကို လာလည်သူတွေအတွက် အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင်လို့ပါ..။
at 11:26 PM 17 comments:
စက် ခွဲ သစ်
မီး တိုက် ကြ။
(၁၉၉၆-၉၇ လောက်ကရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ..။ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် သစ်ခွဲစက်တစ်လုံးရှေ့က ဖြတ်ဖြတ်သွားရင်း ၀င်လာခဲ့တဲ့..နမိတ်ပုံအတွေးစတစ်ခုပေါ့..။
"" သစ်ခွဲစက် "" လို့နာမည်ပေးခဲ့တာကို သူငယ်ချင်းမောင်မျိုးမွန်က ""စက်ခွဲသစ် "" လို့ ပြောင်းရင်ပိုကောင်းမယ်လို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်.။ ဘယ်မဂ္ဂဇင်းမှာမှ မပါခဲ့တာပါ..။
at 10:43 PM7comments:
အမေများနေ့မှာ...ဒီ့ထက်သင့်လျော်တာဘာများရှိတော့မလဲနော် ...ဇာတ်နာအောင်ရေးထားထက်ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်လို..ရက်ရက်စက်စက်.. တိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့..လောကဓံမှုန်ယိုနေတဲ့အချိန်ပေါ့......
ညဟာ ဘ၀တွေရဲ့ အံဝှက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြန်တယ်။
စိုစွတ် မှောင်အိ နေတဲ့ အမှောင်မှာ အနံ့တစ်ခုက စေးကပ်ပျော်ဝင်နေလိမ့်မယ်။
မှတ် အကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ခိုင်းနွားတစ်ကောင်ရဲ့ အရေပြားလို ရထားက သူ့ကိုယ်ကို လှုပ်ခါလိုက်ချိန်မှာတော့ ပလက်ဖေါင်းပေါ်ခြေစုံချမိ လိုက်ကြပြီ။
ရထာားရဲ့ ဥသြသံဟာ ညဉ့်သန်းခေါင်မှာ လိုတာထက် တော်တော်များများကြီးကိုကျယ်လောင်မြည်ဟီးလွန်းနေတယ်..။
အမှောင် ထဲကို တိုးဝင်သွားတဲ့ ရထားကို ငေးကြည့်နေရတဲ့ အချိန်ဟာ တွေဝေမွန်း ကြပ်စရာ ကောင်းသလိုရှိပြီး သိပ်လည်း လျို့ဝှက်သဲဖို ဆန်နေတယ်။
ရာဆာအာရာဖတ်ဟာ သူပိုင်မြေကြီးကို တယုတယ ဆုတ်ယူ နမ်းရှိုက်တယ်ဆိုတာ ရူးသွပ်မှုတစ်ခုလို့ ဘယ်တော့မှ ပြောဖြစ်မယ်မထင်ဘူး..။
တစိမ့်စိမ့်တိုး ၀င်လာတဲ့ အားအင်တွေနဲ့ နှလုံးသားက တဖျတ်ဖျတ်ခါလာ တယ်..။ ရင်ပြင် တစ်ခုလုံး လှိုက်လှဲ ကြေကွဲလာခဲ့တယ်။
အရှိန်ငြီးငြီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးလုံးတစ်လုံးလိုလိမ့်လာခဲ့တာမို့ နီး စပ်ရာတွေကို ကူးစက်လောင်ကျွမ်းလိမ့်ဦးမှာလည်း သေချာနေတာပေါ့..။
ခင်ပွန်းသည်ကိုမနိုင်မနင်းတွဲပိုးပြီးဘူတာကခုံတမ်းလေးပေါ်မှာ လှဲမှီ နေလိုက်စေတယ်..။
ဇက်ကျိုးပြီး ဦးခေါင်းငိုက်စိုက်ကျနေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မျက်နှာကို လက်ဖ၀ါးလေးနှစ်ဘက်နဲ့ အသာညှပ်အုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း အကိုကြီး ရောက်ပြီသိလား.. ၊
တိုးတိုးဖွဖွလေး ပေမယ့် လှိုက် လှဲတုန်ခါ နေတယ်..။
အင်းလို့မပီမသ ညည်းညူသံနဲ့ ဖြူဖွေးအေးစက်ချင်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို မကြည့်ဖြစ်အောင် မထိမ်းချုပ် နိုင်ခဲ့ဘူး..။
ကိုကြီးသက်ရော သက်သာရဲ့လား..၊ ကလေး တွေဆီ ရောက် တော့မှာလေ..၊
ခပ်မြန်မြန်ညိမ့်ပြလိုက်တဲ့ ခေါင်းအဆတ်ကိုကြည့်ပြီး အား တက်လာ သလိုရှိသွားမိတယ်..။
ညက ချောက်ချားစရာ ကောင်းလောက် အောင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြန်တယ်..။
ဒီနေ့မှ ခရီးအသွား အလာတွေ မရှိသလောက် နည်းပါး နေခဲ့တာလား..။ အခြေအနေက တစ်မျိုး ကျေနပ်စရာ ကောင်းနေခဲ့ပြန်တယ်..။
ဒါပေမယ့်ဆိုက်ကားက ကြိုမှာမထားရတော့ တစ်စီးမှကို မရှိဘူး…….. ကိုကြီး..။
ကျွန်မ အိမ်ကိုသွားနိုးမှရမယ်..။ အိမ်မှာ သိန်းဝင်း ဆိုက်ကား ရှိတယ်လေ..။ ကိုကြီးဒီနေရာလေးမှာပဲနေခဲ့နော် ။
လက်ဖ၀ါး ချင်း တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ အတွေ့ဟာ နှလုံးအိမ်ချင်းကို အကျစ် လစ်ဆုံးချည်နှောင်ထားသလိုရှိနေတယ်..။
ဒီလိုအချိန်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံနိုင်ကြလောက်အောင် အပြန်လှန် အားကိုးနေခဲ့မိကြတယ်။
အေးအတူ ပူအမျှ၊ ဆိုးတူ ကောင်းဘက် ဆိုတာတွေနဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်ဆိုတာက စိတ်ဝိဥာဉ်တွေကို စေးစေးပိုင်ပိုင် ခိုင်မာ သိပ်သည်းနေစေခဲ့တယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် သောက အပြည့်နဲ့ ဆုတောင်းပေးနေကြမယ့် မျက်ဝန်းတွေကို မြင်ယောင် သွားမိသေးရဲ့..။
ဒီလိုအခြေ အနေမျိုးနဲ့ ဒီလို ဒုက္ခအတိုင်းအတာ အထိတော့ ဘယ်သူမှ ပူပင်တွေးထင်မိကြလိမ့်မယ် မထင်ဘူး..။
လက်ဖ၀ါး ကို မသိမသာလေး ဖြေချလိုက်ပြီး.. ။
နော်...အကိုကြီး ခဏလေးပါ ၊ သိပ်မှမဝေးတာလို့ ခပ်တွဲ့တွဲ့ ပြောလိုက် ပြန်တော့မသိမသာလေးခေါင်းငြိမ့်ပြရှာတယ်..။
အို...ဒါ...ကျွန်မမြို့ပဲဟာ ကိုကြီးကိုသာစိတ်မချတာလို့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ပဲ
နွေလယ်တည့်တည့်ရဲ့ညသန်းခေါင်ဟာ လေပူတွေနဲ့ချွေးစေးပြန် နေခဲ့တယ်..။
ညထဲမှာ ပျော်ဝင်နေတဲ့ရနံ့တွေက ပိုပြီးသိပ်သည်း လာသလိုပဲ..။
ခုံတန်းလျားလေးကိုမှီထားတဲ့ခေါင်းငိုက်စိုက်ပုံရိပ်ကိုအကွေ့နေရာမရောက်ခင်အထိ သမင်လည်ပြန် လှည့် လှည့် ကြည့်နေမိတယ်..။
စူးစူးဝါးဝါး ထိုးဟောင်လိုက်တဲ့ ခွေးတွေကိုတော့ ဘာအရေး လဲ..။
အကွေ့ကျော်တာနဲ့သုတ်ချေတင်လိုက်တဲ့ခြေဖ၀ါးတွေမှာ ဒီလောက်လောင်မြိုက် ကြေကွဲ၊ပူပန်စိုးရွံ့တွေလိမ်းကျံထူထဲနေခဲ့လိမ့်မယ်မှန်းဘယ်တုန်းကမှ မတွေး ထင်တတ်ခဲ့ဘူး။
ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာဆယ်ကျော်သက်မလေးတစ်ဦး နှစ်ဘက်ခွဲပြီးချ ထားတဲ့ ကျစ်ဆံမြီးလေးရဲ့ အရိပ်တွေ စွန်းထင်နေခဲ့ဖူးပြီး ၊ ကြည် စင်ချို အေးနေတဲ့ ရယ်မောသံတွေ ဖိတ်ကျနေခဲ့ဘူးတာပေါ့။
ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ဆိုတာသိပ်ကိုခက်ခဲပြီး ပညာတတ် ရှားပါး ခက်ခဲတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ၁၅နှစ်ကျော်ကျော်လေးနဲ့ ဆယ်တန်း ကိုနှစ်ချင်း ပေါက်အောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့သမီးအတွက်
အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားမှုတွေ၊ အနာဂါတ်အသစ်တွေ လိမ်းကျံနေတာပေါ့..။
ဟိုး..ခေါင်တယ်ဆိုတဲ့နယ်ကိုမှတာဝန်သွားကျတဲ့ ကျောင်းဆရာမ ပေါက်စလေး အတွက်ဆွေမျိုးညာတိတွေရဲ့ စိုးရိမ်သောက၊ပူပင်ကြောင့်ကျတွေ ထပ်ထပ်ကြမ်းခဲ့ဖူး တာပေါ့။
သန်းခေါင်သန်းနွှဲမှာ သေကောင် ပေါင်း လဲဖြစ်နေတဲ့ခင်ပွန်းသည်ကိုတွဲပြီး၊
သောကတစ်ထုတ်တစ်ပိုးနဲ့ ရုတ် တရက်ကြီး ရောက်ချ လာတဲ့ သမီးကြီးကို ဖအေက ဘယ်လို နှလုံးသား နဲ့ဆီးကြိုမှာပါလိမ့်..။
လ၊ ရက် ရှည်ရှည်သူတို့ဘေးကရုတ်တရက်ပျောက်ရှနေတဲ့ ၊
ဖေကြီးကိုပို ချစ်ပါတယ်လို့ အတိအလင်းကြော်ငြာထားခဲ့တဲ့ သူတို့ ဖအေ လူမမာကို သူ့သားသမီးနှစ်ယောက်က ဘယ်လိုနာကျဉ်တုန်လှုပ်မှုမျိုးနဲ့ လက်ခံမှာပါ လိမ့်..။
အမှောင်ထဲကို တရွေ့ရွေ့တိုးဝင်နေပုံဟာ ဘယ်နေရာမှာ အဆုံး သတ်မယ်မှန်းမသိတဲ့ တွင်းနက်ကြီးထဲကို အရှိန်ပြင်းပြင်း ပစ်ချခံလိုက် ရတဲ့ ခဲ တစ်လုံးလိုရှိနေလိမ့်မလား။
အရှိန်ငြီးငြီး လောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးတောက်တွေဟာ.. ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် ပူလောင်ဖို့ တော့ မေ့လျော့နေတတ် ကြပြန်တယ်.။
ညဟာ မူးဝေ မိန်းမောစေနိုင်တဲ့ရနံ့တွေကိုသိုဝှက်ထားတဲ့ လှပ မွှေးပျံ့လွန်းတဲ့ ပန်းရိုင်းတစ်ပွင့်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဆတ်ဆတ်ကော့ကော့ နိုင်လွန်းလှတဲ့ လေပြည်မှာ နှလုံးသား တစ်ခုလုံးကလည်း တဆတ်ဆတ်ခါချင်နေခဲ့တဲ့ ။
ဒီကိစ္စမှာ ညရဲ့ ဖျား ယောင်းမှု က ၁၀ရာခိုင်နှုန်း ၊ ချစ်တတ်ခြင်းက ၆၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၊ အား ကိုးလေးစားခြင်းတို့က ၃၀ရာခိုင်နှုန်းတို့ တိတိကျကျ ပါဝင်နေလိမ့်မယ်..။
ရပ်ရွာကို သိပ်ချစ်ပြီး အစစအရာရာ ဦးဆောင်ဦးရွက်နဲ့ လေးစား အားကိုးကြရတဲ့ ၊
တည်ကြည်ဖြောင့်မတ် သလောက် ၊ မတရားဘူးထင်ရင် ဘယ်သူ့အတွက်မဆို နည်းနည်းလေးမှ ခေါင်းငုံ့မခံတတ်တဲ့၊
ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ပေးဖို့လည်း အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေတတ်တဲ့၊ ပျော်ပျော်နေတတ်သလောက် ၊သွေးအေး တည်ငြိမ်တဲ့၊
ကိုယ့်ထက် ကိုးနှစ်တိတိကြီးပြီး ကိုယ့်အပေါ်၊ကြင်နာတတ်လွန်းတဲ့ လူမျိုးကို ခင်ပွန်းအဖြစ် ရွေးချယ်မိလိုက်တာဟာ နောင်တရ စရာလို့ ဘယ်တော့မှ ထင်မိမှာမဟုတ်ဘူး..။
သူ ဦး ဆောင်ဦး ရွက်ပြုမယ့် အိမ်ထောင် ဟာ ဘယ်လောက်များ နွေးထွေး သာယာနေလိုက်မလဲပေါ့..။
ဒါပေမယ့် အဖြူရှိပြီး အမည်းရှိသလိုမျိုး ၊ ဒီက ရွာ ဟောင်း နဲ့ရွာ သစ်လို ဆန့်ကျင်ရာအရပ်ကို တစ်စတစ်စဝေးကွာနေကြ သလိုမျိုး၊
ချစ်သူတွေ ရှိတဲ့ အရပ်မှာပဲ မုန်းသူလည်း ရှိနေနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းကိုတော့ နည်း နည်းလေး တောင် တွေးထင် မကြည့်တတ်ခဲ့ကြဘူး..။
သူတို့ရဲ့ ဂေါ်မစွံ လူပျိုကြီး နဲ့ သိပ်ကို ယဉ်ကျေးလှပတဲ့ တစ်ရွာသူ ဆရာမလေးတို့ ဇာတ်လမ်းကို ၀မ်းသာအားရပြော နေကြမယ့် ရွာသူ ရွာသား တွေရဲ့ ညချမ်းမှာ
ဖေဖေက သူ့အားအထားဆုံး သမီးကြီး အတွက် တိတ်တဆိတ် မျက်ရည်ကျ နေခဲ့ရှာသတဲ့။
ညဉ့်လေဟာ ရင့်ရိုင်းစိုစွတ်နေပေမယ့် အရာရာကို မေ့လျော့ချင် လောက်အောင် ချိုအီနွေးထွေးနေခဲ့တယ်.။
တစ်စိတ်တည်းတစ်ဝမ်းတည်းမြဲမြဲ ဆုတ်ကိုင်လိုက်ကြတဲ့ တွဲ လက်တွေဟာ တစ်သက်လုံးအတွက်ပေါ့..။
ချစ်သူ့ရင်ခွင်သည်ကား ငြိမ်းချမ်းနယ်မြေဆိုတဲ့ သီချင်းစာသား တွေကတဖြည်းဖြည်းလှပသိပ်သည်းလာခဲ့တယ်..။
အို.....သံသရာဆွဲဆန့်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ ရှည်ပါစေတော့ကွယ်..။
အဖေတူတဲ့ သမီးနဲ့၊ အမေတူတဲ့ သားလေးကို တယုတယ ပျိုးထောင်ကြရမယ့် လက်တွေဟာဘယ်တော့မှမကွဲကွာနိုင်ကြတော့ဘူး ပေါ့..။
တစ်ယောက်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ဟာ တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခုန်သံ ဖြစ်လာပြီး.. ၊ တစ်ယောက်ခြေသံတွေနဲ့ တစ်ယောက်ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်..။
ကြမ်းတမ်း ခက်ထန်တယ်ဆိုတဲ့ နေ့တွေ ရက်တွေကိုတောင်မှ အတူရှိနေကြတယ်ဆိုတာ တစ်ခုနဲ့တင်ချိုမြိန်နေတတ်ခဲ့ကြတာ...။
ညဟာ ကျိန်စာတွေကို သံစဉ်သွင်းထာတဲ့ တေးသီချင်း တစ်ပုဒ် လည်းဖြစ်ပြန်တယ်။
ရှိုက်ထုတ်ရလွန်းနေတဲ့ သက်ပြင်းပူပူတွေနဲ့ လေထု တစ်ခုလုံးပါးကျဲသလိုရှိနေတယ်။
ညထဲမှာ စိမ့်ပျော်နေတဲ့ ရနံ့တွေဟာ စိမ်းရွှေ ရိုင်းစိုင်းပြီး တစ်စတစ်စ စိုးရိမ်လှုပ်ခတ်စရာ ကောင်းလာကြတယ်။
မဖြစ်နိုင်ဘူး....ဆိုတဲ့ အထပ်ထပ်ပဲ့တင်နေတဲ့မှတ် ချက်ကို လက်လျော့ လိုက်ရချိန်မှာတော့ ဆေးရုံဝန်းထဲက သွေးရှုးသွေး တမ်းထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်..။
တစ်ရံမလပ်အပ်ထားမိတဲ့ မျက်နှာတစ်ခုရဲ့ အရိပ်အခြေကို ဘယ်သူက ပိုသိနိုင်ဦးတော့မှာလဲ...။
ဆေးရုံတင်တာနောက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့မှတ်ချက်ဟာသိပ်ကို နာကျည်းကြေကွဲစရာ ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုပဲ..။
ဘယ်သူ့ကိုမှ နောက်ဆန်ငင်မနေရတော့အောင် သတိ လုံးလုံး ကင်းမဲ့ နေတာလို့အကောင်း ဘက်ကတွေးကြည့်ရမလား..။
နှုတ်ဆက်မှာကြားခြင်းကို ဖေါ်ဆောင်မယ့် အကြည့်ယဲ့ယဲ့လေးတစ်ချက်မှတောင်ရခွင့်မရှိတော့တာဟာ ဘ၀ရဲ့နောက်ထပ် ဆုံးရှုံးခြင်းများလား..။
ဆေးရုံကိုချက်ချင်းမတင်နိုင်ဘဲသင့်လျော်သလို နေထိုင် ရှောင်တိမ်း နေကြခဲ့ရတာအတွက် ဘယ်သူ့ ကို အပြစ် တင် ဆဲရေး ပစ်လိုက် ရမလဲ..။
အို.. ဒီလောက် ချွဲတဂူးဂူးနဲ့ မချိမဆန့် နာကျဉ် ပင်ပမ်း လွန်းနေတဲ့ ခင်ပွန်းကို ဘာမှ ဖြည့်ဆည်း၊ဖေးမ မပေးနိုင်တော့တဲ့ ဇနီး သည်တစ်ယောက်အဖြစ် နဲ့
စိတ်လျော့လက်လျော့ကြီး ဇိမ်ပြေ နပြေထိုင် ကြည့်နေရဦးမှာလား..။
ချစ်သူ့ရဲ့နှုတ်မဆက်နိုင်တော့တဲ့တစိမ့်စိမ့်ခွဲခွာသွားခြင်းမှာ တဖြည်း ဖြည်း ကျန်နေရစ်ရမှာလား..။
မမကြီးဆိုတဲ့ အငယ်မရဲ့ အသံကိုလည်းမကြားချင်တော့ဘူး..။
အသားကုန်ပြေးထွက်လာတဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာ ဘူတာဘေးကဖြတ်လာ တော့ ဆောင့်အဆွဲခံလိုက်ရသလို ရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်။
မှောင်မဲတိတ်ဆိတ် နေတဲ့ ဘူတာရဲ့ချောင်ကျကျ နေရာက ထိုင်ခုံလေးပေါ်မှာ...။
အိုဘယ်လိုမှ စိတ်မချနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေ..။
လက်ဖ၀ါးတွေကိုမလွတ်တမ်း တင်းကြပ်နေအောင်ဆုတ်ကိုင်ထား တဲ့ နောက်ထပ် လက်ဖ၀ါး တွေ...။
အို ဘုရား... ဘုရား.. ၊ သူ့ရဲ့ အဆမတန် တင်းမတ်ထားရတဲ့ စိတ် တွေကို သမီးနဲ့သားကို တွေ့ပြီးသွားလို့ လျော့ချလိုက်တာလား..။
ဒီလောက်ရိုးစင်းတဲ့မိသားစုထဲကို ဒီလောက်ရက်စက်ဆိုးဝါးတဲ့ကံကြမ္မာမျိုး ရောက်လာတယ်ဆိုတာကရော ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား..၊
အခက်အခဲ၊ အကြပ် အတည်းတွေကြားထဲက အုတ်ဖိုသွားချင်တယ် ဆိုတာကရော...
သားနဲ့ သမီးကို ဘယ်လိုပြောပြရမလည်း..။
ဖေကြီးက မနိုးသေး ဘူးလားလို့ မေးတတ်တဲ့ အငယ်ကောင်လေးရဲ့ မေးခွန်းတွေ၊
အို အဆုံးအစမရှိတဲ့ လေဟာနယ်ထဲကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ တစ်စစီ ပေါက်ကွဲလွင့်စင် ထွက်သွားသလိုလို..။
သမီးဆိုပြီး ဆွဲပွေ့လိုက်တာဟာ ဖေဖေပဲ..။
ထုံကျဉ် အေး စက်နေတဲ့ ရုပ်ခန္တာတစ်ခုလုံးကို အားမရနိုင်တော့ဘူး..။
နာကျဉ် ပူပြင်း နေလွန်းတဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ခံနိုင်ရည်မရှိတော့ဘူး..။
ဒိုင်းကနဲ ဆောင့်တိုက်လိုက်တဲ့အသံနဲ့ ဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး နာကျဉ်မူးဝေသွားတော့မှ မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်စီးကျလာခဲ့တယ်..။
ဟုတ်တယ် ဖေဖေ..ရဲ့ ... သူ..။
ဖေကြီးပြန်လာပြီတဲ့ ဆိုပြီး လှေခါးက တဒိုင်းဒိုင်း ဆင်းချသွား တဲ့ သမီးကြီးကို မတားမြစ်မိတော့ဘူး..။
ဗလုံးဗထွေး အော်ဟစ်သံနဲ့ အိမ်ပေါ် ပြန်ပြေးတက်လာပြီး သွေးပျက်ခမန်း လူးလှိမ့်ငိုယိုနေတဲ့ သမီးကြီးကို မချော့မြှူ၊မဖျောင့်ဖျနိုင်တော့ဘူး..။
အိပ်မှုန်စုံမွှားလေးနဲ့ထထိုင်ပြီး အားလုံးကို ကြောင်ကြောင်အအလေးငေးနေရှာတဲ့သားငယ်လေးကိုမထွေးပိုက်မိတော့ဘူး..။
ငိုချလိုက် စမ်းဆိုပြီး တအိအိရှိုက်ငို နေတာ ဖေဖေပဲပေါ့..။
အို...။ မနက်ဖြန်ဆို ဘာတွေဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်..။
အခု..အတူတကွရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရသမျှတွေကို .. ဒီအတိုင်းပစ်ချ ခဲ့ပြီး တကယ်ပဲထွက်ခွာသွားပြီလား...။
ဥိးဆောင်ဦးရွက်နဲ့ ဒီမတရားသဖြင့် လီဆည်ခင်းကျင်းထားတဲ့ အမှုအခင်းကို သွေးအေးအေး ဦးဏှောက် ကြီးကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း မပေးခဲ့တော့ဘူးလား..။
အသက်သုံးဆယ်စွန်းစွန်း မြေဖြူနဲ့ ကလေးပုခက်ကိုပဲ ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇနီးသည်လေးရဲ့ လက်ဖ၀ါး အစုံအတွက် ဘယ်လောက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကျ သွားလိုက် ရှာမလဲ..။
ညက တဖြည်းဖြည်း အေးစက်ရင့်ရော်နေခဲ့တယ်..။ညရဲ့ရနံ့ဟာ မခံမရပ်နိုင်အာင်ကို ညှီဟောက်နေခဲ့တယ်…။
ရင်ဆိုင်ရဦးမယ့်နေ့ရက်တွေအတွက် အသင့်ပြင်ထားရဦးမယ် မဟုတ်လား..။ ငိုချလိုက်ပါ မမကြီးရယ်ဆိုတဲ့ ညီမလတ်ကို အော်ငေါက် ပစ်လိုက်မိတာလား..။
လောလောဆည်မှာတော့ မျက်ဝန်းအားလုံးနဲ့ အဝေးဆုံးကို ထွက်ပြေးချင်နေခဲ့တယ်..။
နွေလည်ညရဲ့ လေပြည် ရိုင်းရိုင်းဟာ ရင်ထဲကမီးတွေကိုမြှောက်ပင့် ပေးနေခဲ့သေးလား..။
အထုံးအနှောင်မဲ့ ဖွာဝဲကျနေတဲ့ဒီဆံနွယ် အရှည်ကြီးကို ချစ်သူက သိပ်မြတ်နိုးတာပေါ့..။
လမ်းမီးရောင်အောက်မှာ ရဲမြနေအောင်ပွင့်ခဲ့တဲ့ စိန်ပန်းပွင့်ချပ် အကြွေတွေကို အသာဖွဖွ လျောက်ကောက်နေမိတော့ ဖေဖေက စိုးရိမ် တကြီး ရပ်ကြည့်နေရှာတယ်..။
အနီတွေ..။ ရဲရဲတောက်နေတဲ့ အနီတွေ ။ အို အကိုကြီး သိပ်ကိုကြိုက်တဲ့ အရောင်ပေါ့ကွယ်..။
ညက အလွမ်းနဲ့ ရန်ငြိုးတွေကို ကြောင်လက်သည်းလို ၀ှက်ထား ပေးနိုင် တယ်။
နဖူးပြင်ကို နွေးညက်သွားစေတာဟာ နှုတ်ဆက်အနမ်းပေါ့..။
ကလေးတွေရဲ့ခြင်ထောင်ကိုအသာလေးပြန်ချထားလိုက်တဲ့သူ့မျက်နှာက ဆုံး ဖြတ် ချက်တွေနဲ့ ရဲရင့်ခိုင်မာနေခဲ့တယ်..။
အစစအရာရာ စိတ်ချပါရစေဆိုတာ တတွတ်တွတ်ပြောနေခဲ့တဲ့ စကားပေါ့..။ ကြေကွဲညှိူးငယ်လွန်းနေတဲ့ မျက်ဝန်း တွေကတော့ မမြင် ရက်စရာပါ ပဲ..။
ပုဂ္ဂလိကဆန်တဲ့အပြင် အတော့်ကို သိမ်းဖျင်းအောင်တန်းကျ တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ ရန်ငြိုး ရန်ကြွင်းတွေကို အခြေခံထားပြီး
အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ လုပ်ဇာတ်ဆင်ဖွဲ့နွဲ့ထားတဲ့ ဥပဒေအခင်းအကျင်းမှာ သူမပါ ကန့်လန့်ပါ နေတာ အတွက် သူက ရင်ထုမနာ ဖြစ်နေခဲ့ရှာတယ်..။
တရားကို နတ် စောင့်တယ်..၊ ငါ တို့ သစ္စာတရားက ငါတို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ် ဆိုတာကို သူက ယုံယုံကြည်ကြည်ထက်ထက်သန်သန်ကြီး ပြောဆိုနေခဲ့ရှာ သေးပေါ့..။
ဒါဟာ ကိုယ်သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂါတ်အတွက်နဲ့ပါဆိုင်တယ် ဆိုတာက ကဗျာ တစ်ပုဒ်လိုလွှတ်လှ နေခဲ့တယ်..။
သူတို့ကိုမနိုးတော့ဘူးနော်ဆိုတာ တို့တွေ ရက်ရက် စက်စက် ကြီးကို မှားခဲ့ကြတဲ့အမှား...ပဲ။
ကလေးတွေအတွက် သူ့ဖခင်ရဲ့ ခပ်သြသြကြီး ရယ်မောလိုက်သံကို နောက်တစ်ခါ ထပ်ကြား နိုင်ကြရဦး မယ် ပေါ့..။
သူ့အဖေလက်မောင်းကို အလုအယက်ခိုစီးပြီး ဖေဖေကြီး ကိုချစ် တယ်ဆိုတဲ့ တေးသီချင်းကို အသံကုန်သီကျွေးခွင့်လည်ထပ်ရကြဦး မယ်ပဲပေါ့။
အကိုအကြီး ဆုံးအတွက် အငယ်ဆုံးညီမလေးရဲ့ စိုးရိမ်သောကတွေလို့လည်း ပြောလို့ ရနေသေးရဲ့ကွယ်.. ။
တစ်စတစ်စအမှောင်ထဲကိုတိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ကျောပြင်ကို ကြည့်ပြီး အံကို တင်းတင်းကြိတ်ထားမိခဲ့တယ်..။
အမှန်တွေက မှားသွားသလား..၊ အမှားတွေအားလုံးမှန်သွားခဲ့တာ လား..။
ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်မှန်းမသိတဲ့ ပုစ္ဆာ တစ်ပုဒ်ကို အတူတကွ ဖြေရှင်းကြ ဖို့ဖန်တီးလာခဲ့တယ်လေ..။
အငြင်းပွားမှုတွေ ၊အတ္တမာနတွေ၊ဒေါသမောဟတွေ၊စွဲချက်ပုဒ်မတွေ၊ တရား တဘောင်တွေ၊ နောက်ဆုံး စစ်ပွဲတွေ...၊
တစ်မြေတည်းနေ တစ်ရေတည်းသောက်၊ တစ်ကျောင်းတည်းတက် တစ်စာထဲအံခဲ့ကြတဲ့၊ လည်ပင်းဖက် ပေါင်းဖော်လာကြသူတွေမှာတောင်
ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်စွဲထင်ရာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘာကိုမှသတိမရနိုင် လောက်အောင် နာကျည်း မုန်းတီး တတ်ကြတယ်၊
ရက်စက် ကောက် ကျစ်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာကို ဒီရွာလေးကို ရောက်မှ သေသေချာချာ သိရှိသွား ခဲ့ရတယ်..။
အို ကိုကြီးနဲ့အတူ အရာရာကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ အဆင် သင့်ရှိနေပါတယ်လို့ သွေးရူးသွေးတမ်းဆန်ဆန် အထပ်ထပ်ပြော နေမိခဲ့သေး ရဲ့...။
ဘ၀ထဲက တိုက်ပွဲငယ်တစ်ခုလို၊ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကျော ချင်းကပ်ပြီး ရွတ်ရွတ်ချွံချွံ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြဖို့ နှလုံးသွေးတွေ နဲ့ရင်းပြီး
သစ္စာပြုလိုက်ကြချိန်မှာ ကံကြမ္မာဆိုတာကြီးကိုတောင် မေ့လျော့ နေခဲ့မိကြ ပါရော....။
ဒီညမှ ချွဲချွဲ ငင်ငင် မြည်ကျွေးနေတဲ့ ဥသြငှက်ကလေးဟာ.. ဖိတ်လျှံကျနေတဲ့ အလွမ်းတွေကို မြင်တွေ့ သွားလေလို့များလား..။
ညထဲမှာ စိမ့်ပျော်နေတဲ့ ခရမ်းရောင်တွေဟာ စိတ်ညစ်ညူးစရာ သင်းထုံ နေခဲ့တယ်..။
ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းရခြင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရတွေ…...။
အို...အဲ ဒီ အချိန်မှာ အဲဒီစကားစုတွေက ထင်သလောက် လေးပင် မနေကြသေးဘူး..။
ခြေဖျားထောက်ပြီးမွှေးကြူလိုက်တဲ့ အနမ်းမှာတော့ အလွမ်း ကျင်ကျင် တွေနဲ့ အနာတရတွေက မှိုင်းအုံလို့ရယ်...။
ချစ်သူက သူ့ပါးပြင်ပေါ်စွန်းသွားတဲ့ သူမမျက်ရည်တွေကို တယုတယ တမြတ်တနိုး သယ်ဆောင်သွားလေရဲ့..။
ညဟာ မဆုံးနိုင်သေးတဲ့ ခရီးကြမ်း တစ်ခုလည်းဖြစ်သေးရဲ့..။
မှောင်မည်းတိတ်ဆိတ်နေတဲ့သန်းခေါင်ယံခရီးမှာ ငေးချင်ရာ ငေးနေ ရတာက စိတ်တွေ နေလို့သိပ်ကောင်းတာပေါ့...။
ကောင်းကင်မှာဖျောက်ဖျောက်ချားချား ထင်နေတဲ့ကြယ်တွေကို ယောင်ရမ်းပြီး ရေတွက်ကြည့်နေမိသေးရဲ့..။ဟိုးဝေးဝေးကလွင့်ကြွေသွားတဲ့ ကြယ်ဟာ သူပဲဖြစ်မှာပါ..။
အေးမြလတ်ဆတ်နေတဲ့ လေထဲမှာခပ်မြမြပါနေတာဟာ ဘာရနံ့ တွေလဲ..။
ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရဦးမယ့် အနာဂါတ်အတွက် လှုပ်ရှားစိတ် စော လွန်းနေရတဲ့ ဇောရနံ့တွေများလား…။
ဟိုး…တရွေ့ရွေ့ဝေးကျန်ရစ်တာဟာ သူ သိပ်ချစ်တဲ့ ထိန်တော ဆိုတဲ့ရွာလေးပေါ့..။
ကြီးတောင့်ကြီးမားနဲ့ ပိုးပန်းစဉ်ကရှက်ကိုးရှက်ကန်း အပြုံးကိုမြင်ယောင်မိလိုက်တော့ ရင်ကနင့်သွားအောင်နာကျဉ်လာမိပြန်တယ်..။
မျက်ရည်ဆိုတာကို ဘယ်အချိန်ရောက်မှ ကျနိုင်တော့မလဲ..။
ဘ၀မှာ မျက်ရည်ထက် လေးနက်ခန့်ထည်တဲ့ အရာရှိနေ သေးတယ်ဆိုတာကို တအံ့တသြ သင်အံသိရှိ လိုက်ရပြီလေ..။
အကိုကြီး အခုဆို ဘယ်နေရာမှာလဲဟင်..။ သင်သွားလိုရာသွား နိုင်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်း အမှန်တကယ်ပဲ လွတ်မြောက်ချမ်းသာ ခွင့်ရရှိ သွားပြီလား..။
သူမကတော့ သူနဲ့အတူသွားရမယ်ဆိုတဲ့ခရီးကြမ်းကို တစ်ယောက် တည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လှမ်းထွက်ခဲ့ပါရော..။
သူပြောဖူးတဲ့ တရားကိုနတ်စောင့် တယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ သစ္စာတရား ကို ရဲရဲရင့်ရင့်ကြီး အဖေါ်ပြုလို့ရယ်လေ..။
အမှောင်တွေကြားထဲမှာ မမြင်ရတော့လောက်အောင် မှောင်အိ ကျန်ရစ်တဲ့ရွာ လေးဆီကို လှမ်းမျှော် မနေတော့ဘူး..။
နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ပါးပြင်ကို စိတ်ကူးနဲ့ မွှေးမြ ကြည့်မနေချင်တော့ဘူး..။
ကလေးတို့ရဲ့ အနာဂါတ်မှာ မေမေက ကြက်သအုပ်မကြီးလို ဘယ်သိမ်းစွန်ငှက်ကိုမဆို ရင်ဆိုင်ဖို့ ရဲရင့် နေမယ်ဆိုတာကိုတော့ တိုးတိုးဖွဖွလေး ကတိပေးခဲ့တယ်..။
ပုံပြင်သိပ်ကြိုက်တဲ့ သားလေးအတွက် သိပ်ကို စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းပြီး တုန်လှုပ်အံသြစရာ၊ နာကျည်းရွံရှာစရာ ပုံပြင်တွေ သယ် ဆောင် လာနိုင်ခဲ့မယ် ထင်ပါရဲ့..။
ပန်းပွင့်လေးတွေကို သိပ်ချစ်တတ်ပြီး.. နှလုံးသား နူးညံ့လွန်းတဲ့ သမီးကြီးအတွက်ဆိပ်ဖလူးပန်းခြောက်လေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင်တော့ပျော်ရွှင်ကျေနပ်
ဘ၀ဆိုတာမှာ ထင်မှတ်မထားပဲ ယုတ်မာ ရက် စက် လွန်းစွာ ချုံခိုတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ ရန်သူတွေရှိနေတတ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ ရေရေ လည်လည် ပြောကိုပြောထားရဦးမယ်....။
ညတွေရဲ့ ဟိုမှာဘက်မှာ အလင်းဆိုတာ ရှိနေနိုင်သေး တာပဲ..... ။
အို... လောလောဆည်မှာတော့ အလင်း အနက်တွေ ချယ်သ ထားတဲ့ ညရထားကို စီးနင်းလာခဲ့တယ်.။ ။
at 10:09 PM 14 comments:
ဗီတာမင်လို သီး ဝေ လို့..
ငါတို့ ကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိပြီ..။
တန်းမြင့် ခံစားချက်သဘင်တွေ ဆင်ယင်ကျင်းပကြ..
အသက်ဓါတ်ကို စကားလုံးနဲ့ မျှားခြင်းအထုံအလေ့မှာ ပျော်မွေ့ကြ..
ကိုယ့် နှလုံးသွေး ကိုယ် မင်ရည်လုပ်
ကိုယ့် အရေခွံ ကိုယ် ဆုတ်ပြီး စာ စီ ကြ..။
ပန်းမကိုင်ပဲနဲ့လည်း ကျ တတ် ကြ ရ မယ် .။
ငွေကြေးဆိုတာ စိတ်တိမ်းပွေအောင်ပြုစားတတ်တဲ့ စုန်းကဝေပေါ့..
ကျော်ကြားမှုဆိုတာ တရွရွယားယံစေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်ပိုး....
ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ မိုးသံကြားတိုင်း ထပွင့်ပြချင်နေတဲ့ ပန်းပွင့်ပေါ့..
ငါ တို့ အ တွက် က
အဆင့်အတန်းဆိုတာ အနယ်ကျနိုင်ခြင်း စာအုပ်စင်..
ခေတ် ပေါ် က ဗျာ ဆို တာ ..
ငါတို့ နှလုံးသားသိုက်ကို ညွှန်းဆိုပြလိုက်တဲ့ ၀ှက်စာကွယ့်...
ပြဌာန်းချက်မြစ်ကျင်းကို ရေဆန် ဆန်ဆန်လှော်ခတ်ရင်း
ငါး ခုံး မ တွေ ချည်း ။ ။
(ဧပြီလ၊၂၀၀၈ ခုနှစ်( အမှတ် - ၁၇ )ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း)
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆောက်တည်နိုင်ခြင်း ရဲရင့်မှု တစ်ခုလည်းလိုမယ်..။
ဘွားကနဲ...လင်းပ သွားတဲ့...လ ဖြစ်မယ်..
ကိုယ့်ကို ပစ်ချတော့မယ့် မြားဦးအတွက်
at 6:23 AM 17 comments: